Accueil > Gazetin'ny nosy > IRD Fianarantsoa : Mikorontana ambony ambany
IRD Fianarantsoa : Mikorontana ambony ambany
Tsy tako-nafenina intsony fa ady lahy politika tsy misy toa izany no ataon’ireo lohany amin’ny IRD (isika rehetra miaraka amin’i Rajoelina) ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony na I Fianarantsoa. Ny governoran’ny Faritra ingahy Popil Razafindrafito sy ny ekipany miady amin’ny tarikin’ny ben’ny tanana ramatoa Sahondramalala Ratsimbazafy izay renin’ny minisitry ny fampianarana sy ny fanabeazana fototra . Manampy azy ireo ramatoa Aurelie Razafinjato izay sekretera nasionaly ny IRD.Samy efa manomana ny olona hapetrany amin’ny fifidianana depiote sy ben’ny tanana amin’ny fifidianana ho avy aorian’ny 2023. Tsy mitovy ny hevitra ka dia mifampihantsy any amin’ny radio sy imasom-bahoaka izy ireo.
Ankilany indray dia manampatra ny fahefana omena azy ny ekipan’i Razanamahasoa Christine izay filohan’ny Antenimierampirenena sady depiote voafidy tany Ambatofinandrahana. Ny tale izay notendreny maromaro any Fianarantsoa renivohitra no fitaovana amin’izany. Tarihin’ny tale rejionaly ny harena ankibon’ny tany ramatoa Vonjy Randriatsimihanta izany sy ny vadiny izay tale ny angovo antsoina hoe Ralava. Izy ireo no milaza azy fa mpitarika ny TGV (tanora Malagasy vonona) any Fianarantsoa. Miseko be izy ireto ary mampiasa fahefana tanteraka amin’ny maha olon’i Razanamahasoa Christine azy. Mandeha irery ka miady amin’ny tarika roa eo ambony koa.
Manaraka izany dia tsy mifakahazo ny depiote roalahy IRD dia i Seth sy Guillaume. Izay fivoriana tarihin’ny iray dia lavin’ny iray ary tsy atrehan’ny iray ihany koa. Mikorontana ambony ambany ny ao Fianarantsoa ao. Marobe ny resaka mandeha sy ny ady an-trano any amin’ity renivohitry ny betsileo ity. Fantatra fa hanao fivoriana ny TGV amin’ny asabotsy faha 09 aprily 2022. Efa misy ny fanavakavahana amin’izany ka maro no voailikilika.
Fantatra koa ankilan’izany fa mametraka ny ekipany ny mpomba an’ingahy Siteny Randrianasoloniainko amin’izao fotoana izao ka maro ny mpomba ny IRD no voalaza fa voasarika any amin’ity fikambanana vaovao ity.
Hisy fiatraikany be dia be amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 2023 izao korontana ambony ambany any Fianarantsoa izao.